Sideen u isticmaali karaa dhabarka dhinacyada tartanka aniga laftigayga?
Dabcan, shirkadda raadinta adduunka ayaa waxay naga dhigaysaa in algorithm waaweyn ay diiradda saarto waxyaabo tayo sare leh oo bixiya qiimaha dhabta ah ee isticmaalaha. Shaki kuma jiro, mawduuca weli waa boqorka. Si kastaba ha ahaatee, profile xiriirka organic-ka ee bogga kasta ayaa ah kan labaad ee ugu muhiimsan ee Google. Taasi waa sababta aysan u baahnayn in la yiraahdo dib-u-tayada tayada ayaa ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee fikradda casriga ah ee Mashruuca Optimization. Waxaan loola jeedaa inaan qalad u yeesho astaamaha dhabarkaaga ma aha oo keliya inuu ku guuldareysto inuu bixiyo wax kasta oo la qiyaasi karo laakiin waxa laga yaabaa inuu sidoo kale dhaawac u geli karo horumarkaaga hadda. Intaa waxaa dheer, haddii Google laga shakiyo boggaaga ama blog-kaaga khiyaamo, waxay xitaa u imaan kartaa xagjirnimo marka ay wax walboo dhameestiraan natiijooyinka raadinta hal mar iyo weligeed (haddii kale, mamnuucida joogtada ah ee raadinta). Taasi waa sababta lafaguridda dhabarka tartanka - iyadoo leh faa'iidooyinkooda ugu badan ee faa'iidada leh iyo fara-xumeyn daran - waxay noqon doontaa go'aan aad u habboon oo aad u baahan tahay si aad u maamusho istaraatiijiga dhismaha ee ugu fiican. Waxaan rabaa inaan kuu muujiyo sida loola macaamilo dhabarkaaga tartanka. Sidaa daraadeed, hoosta hoose waa saddex tallaabo oo sahlan si ay u wadaan baaritaan habboon oo ay ka dhigaan kuwa ugu muhiimsan ee ka soo horjeeda suuqa.
Aqoonsiga Your Niche Opponents
Ka hor inta cilmi-baarista dabeecadaha tartanka, waxaad u baahan doontaa inaad qeexdo website-yada ugu guulaha badan ee ay leeyihiin kuwa ka soo horjeeda ee suuqa, ama qaybtaada ugu muhiimsan ee warshadaha. Hawlgalkuna dhab ahaantii waa mid la maareyn karo, oo laga yaabo inaad ka fikirto. Aniga ahaan, waxaan u adeegsaday si firfircoon oo aan wax u barto guulaha iyo guuldarooyinka aan horey u soo galay. Fikrad ahaan, aqoonsashadaaga soo horjeeda suuqa waa in la sameeyaa waqti dheer ka hor intaan internetkaada ama blogku ku noolayn. Hase yeeshee, hadda waa waqti aad u socotay adiga oo raacaya falanqeyn dhameystiran oo tartan ah si ay u isticmaalaan dib u habeynta tartanka ugu fiican ee faa'iidadaada. Ma ogtahay meesha laga bilaabayo? Waxaan kugula talinaynaa inaad isticmaasho Serpstat, oo ah qalab bilaash ah oo internetka ah kaas oo iga caawiyey wax badan oo fahamsan oo aan fahamsanahay nuucyadeyda ugu weyn. Ku dhigista Ingiriisi cad, waxaad isticmaali kartaa qalabkan si aad u ogaato bogagga shabakadaha ee aad ku guuleysateen. Iyadoo la tixgelinayo tirada ereyada muhiimka ah, qiyaasta celceliska goobta, iyo xaqiiqda ah in ay si fiican u socoto, waxaad fahmi doontaa meesha laga bilaabo.
Ogsoonow hadafyadaada Guud
Inta badan, PA (bogga bogga), DA (domainka), iyo sidoo kale PR (bog darajo) waa sifooyinka ugu muhiimsan ee boga boggiisa danbe. Sida muuqata, ujeedadaadu waa in la helo dhibcaha ugu sareeya, kuwaas oo ka mid ah saddexdan mitir. Sidaa daraadeed, waa inaad sidoo kale ogaataa xogta soo socota - tirada maskaxdaada tartiib tartiib tartiib ah (iyadoo la eegayo bogagga iyo domains), iyo sawirka weyn ee qoraallada lagu dhajiyo ee loogu talagalay SEO (tiradooda, kala qaybintooda, iyo kala duwanaanta ereyada muhiimka ah, , iyo hantida kale ee muhiimka ah).
Falanqaynta Arinkaaga Dib u Dhaqanka
Dabcan, ma jirto naqshad guud ee guusha. Si kastaba ha ahaatee, adigoo isticmaalaya qalabka falanqaynta si aad u hesho faham qoto dheer oo ku saabsan dib udhiskaaga tartanka waxaad u badan tahay habka ugu wanaagsan ee looga bixi karo tartanka suuqa. Sidaa darteed, waxaad u baahan doontaa falanqeyn tartan ah oo loogu talagalay websaydh kasta oo leh cinwaan xiriirin ah oo ku yaal bogga sare ee raadinta khuseeya. Habkaa, waxaan ku talineynaa in aan isku dayo mid ka mid ah qalabka falanqaynta gadaal ee soo socda - Open Site Explorer (Moz), Falanqaynta Nadaafada, Qaylo-dhaanta Qalinka, ama Ahrefs - Waxaan. Si kastaba ha ahaatee, aniga ahaan, si kastaba ha noqotee, hawsha ugu muhiimsan ee shaqadoodu waa mid isbarbardhigi kara, xitaa inkastoo dhowr sifo oo qotodheer iyo dhowr shaandhayn oo casri ah oo ay bixiso Analyzer (Semalt) iyo Open Site Explorer (Moz). Sidaas darted, adiga kaliya ayaa adiga kuu ah si aad u go'aansato midkii ugu horeeyay ee aad isku dayeyso. Markaad aragtay fikradda saxda ah, dhammaan waxa aad u baahan tahay waa inaad dib u soo celiso awoodda ugu xooggan ee ka soo horjeeda, ama ugu yaraan faham fiican oo ah geeddi-socodka isku-xidhka xiriirka ee nuucaaga Source .